Ahoana no fomba hanajan'ny lehilahy anao: tsy misy toro-hevitra tsy misy dikany 11! - Fifandraisana
Isika rehetra dia maniry ny hanaja ny olona amin'ny fiainantsika, na ny namantsika, ny lehibintsika, na ny olona iarahantsika.
Raha mitady fomba hahatonga ny lehilahy hanaja anao ianao dia aza mitady lavitra intsony.
Ity lahatsoratra ity dia manazava ny fomba hahazoana sy hitazonana ny fanajan'ny lehilahy, na inona na inona andraikitra raisin'izy ireo amin'ny fiainanao.
1. Fantaro hoe avy aiza ny tsy fanajany
Betsaka ny antony mahatonga ny lehilahy mahita fa sarotra ny manaja vehivavy, na dia fanapahan-kevitra tsy nahatsiaro tena aza ity.
Mbola misy ny stigma manodidina ny vehivavy tsy mahay toy ny lehilahy - tsy manan-tsaina na tapa-kevitra, ary tsy mendrika hahomby.
Izany dia avy amin'ny tantara lava momba ny tsy fitoviana sy ny fanaovana firaisana ara-nofo ary, na eo aza ny fanatsarana azy, dia mbola lavitra ny lalana.
Zava-dehibe ny mahatadidy fa ny tsy fanajan'ny lehilahy ny vehivavy dia tsy fanahy iniana tanteraka.
Tsy midika akory izany fa tsy manafintohina sy mahasosotra, fa tsara kosa ny mailo fa ny sasany aminy dia tsy fanahy iniana araka ny eritreretintsika azy.
Ho an'ny lehilahy sasany, tranga tsotra izao ny zavatra fantany.
Mahamety ve izany? Tsia, saingy midika izany fa misy fanazavana marina ao ambadik'izany.
vato mangatsiaka steve austin 2018
Mety tsy mbola nisy mpikambana vehivavy tao amin'ny solaitranao talohan'izay ny lehibenao, koa mety sahirana ianao hanaja anao satria mahita ny vehivavy ho sekretera izy.
Ie, mahasosotra izany, fa farafaharatsiny mandroso hatrany ny zavatra ary afaka mahita fomba hahatakarana ny fihetsiky ny olona ianao.
Raha tsy mampiseho fanajana anao ny mpiara-miasa aminao ary manana fanantenana stereotypical aminao dia mety noho ny fitaizany azy io.
Ny lehilahy sasany dia mbola niaina vehivavy fotsiny amin'ny maha-mpikarakara tokantrano - angamba ny reniny nijanona tao an-trano ary nanao ny fandrahoan-tsakafo sy ny fanadiovana fa ny rainy no mpamatsy vola.
Ny tsy fanajana tsapanao dia mety ho avy amin'ity fahatakarana lalim-paka ny anjara asan'ny lahy sy ny vavy ity.
Tsy midika izany fa tsy afaka ny hanova izy fa midika fotsiny fa mila manamboatra ny valinteninao sy ny fitondran-tenanao mifanaraka amin'izany ianao.
2. Asehoy azy ny smartphone
Sarotra ny mijanona tsy mieritreritra stereotypes rehefa miatrika lehilahy tsy mety manaja anao!
Raha miverina miverina ianao ary mieritreritra lojika kokoa, na izany aza, dia hahita fomba hahazoana fanajana izany asa izany ianao.
Porofoy ny faharanitan-tsainao (tsy ny tokony ho izy akory!) Amin'ny fananana hevitra fa tsy matahotra ny hanohana azy ireo.
Miezaha mafy hizara ny fomba fijerinao - tsy manambany tena na mahafantatra izany rehetra izany - ary ho tsapan'ny lehilahy manodidina anao fa tsy matahotra miteny ianao.
Mihevitra ny lehilahy sasany fa ambany ny vehivavy satria tsy dia marani-tsaina izy ireo, ka ampiasao ny fahasosoranao amin'izany mba hampandeha anao.
Mitenena mandritra ny fivoriana na maneho hevitra momba izay halehanao amin'ny daty fisakafoanao. Zavatra kely izy ireo, saingy fanombohana.
Asehonao fa tsy doormat ianao ary afaka mijoro ho anao .
Mety hatahotra ny lehilahy sasany ny fahaizanao na ny fahaizanao miteny ho anao - miala amin'ireto!
Ireo lehilahy mendrika ny fotoanao dia hahafantatra ny herinao ary hankasitraka izany.
3. Raiso ny fifehezana
Ny lehilahy sasany dia mbola mieritreritra ihany fa ny vehivavy dia tsy mahay toa azy, na manao DIY, mitondra fiara, na manao spaoro.
Raha tokony hiandry sy hijery lehilahy hitsara anao ianao, dia mazotoa ary manapaha hevitra mba hampiseho azy ireo ny fahaizanao.
Tsy azon'izy ireo atao ny manontany ny fahaizanao raha porofonao azy ireo aloha!
Aza matahotra mandray andraikitra.
Aza manantena ny hanovan'ny sakaizanao ny jirony fa ny tenanao ihany no ataovy.
Azo antoka, zavatra kely io ary tsy tokony hanan-danja ny fahafahanao manao izany, fa ny lehilahy sasany dia mila fampahatsiahivana fa olona matanjaka sy mahay ianao matetika!
Afaka miasa amin'ny DIY manodidina ny trano koa ianao. Raha tsy azonao antoka 100% dia jereo ny horonan-tsary YouTube na tadiavo aloha ny torolàlana an-tserasera.
Ho faly amin'ny fahalalanao sy ny fahaizanao ny namanao.
4. Manaja ny tenanao aloha
Mifanaja ny fifanajana. Tsy midika fotsiny izany hoe mila mifanaja ny olona iray, fa mila manamboatra azy io mba handraisana azy.
Arakaraka ny hanajana ny tenanao no hahalalan'ny olona hafa fa mendrika ny hajain'izy ireo koa ianao.
Alao an-tsaina ny seho - mahita olona mandeha ao amin'ny efitrano ianao. Tena saro-kenatra izy ireo ary tsy matoky tena.
Ny fihetsikao voalohany dia mety tsy dia tsara loatra. Mety ho henjana izany, saingy misy antony ny fahatsapana tsinay!
Alao an-tsaina izao fa misy olona mandeha, mitondra ny tenany tsara ary milay amin'ny fibaikoana ny efitrano, amin'ny lafiny iray.
Hino avy hatrany ianao fa matoky tena sy manaja tena izy ireo, ‘mendrika ny hisarika ny sainao, raha tianao.
Ny fomba fitondrantsika tena sy fisehoantsika tena dia milaza betsaka momba ny fahatsapantsika ny tenantsika.
Na manandrana mahazo fanajana amin'ny lehibenao ianao na daty voalohany, dia tadidio izany.
Raha afaka maneho an'io fanajana ny tenanao sy ny fihetsikao io ianao, dia hamolavola karazana vibe mety!
5. Fanajana eo amin'ny toeram-piasana
Ny fifandraisana amin'ny asa dia mety ho tolona, ​​na iza na iza tafiditra.
Matetika misy ny dinam-pahefana na ny politika amin'ny birao izay tsy maintsy arahinao amin'ny fomba tsy ofisialy, izay mety hahatonga ny raharaha ho sarotra be.
Rehefa miresaka ny asanao dia zava-dehibe ny fahatsapana hajaina sy mahazo aina.
Raha miara-miasa amin'ny mpiara-miasa na lehiben'ny lehilahy ianao, dia lavitra be ny matihanina.
Na manao ahoana na manao ahoana tsy fitoviana na tsy ara-potoana ny tontolon'ny asa ataonao, dia mandoa (ara-bakiteny) ny fitondran-tena tsara sy ny fahalalam-pomba.
Hahazo fanajana haingana ny sakaizanao lahy ianao raha afaka mihazona ny anao amin'ny resaka sy mitazona ny maha-matihanina.
Ny hatsikana dia tsara foana, saingy mitandrema mba tsy hihoatra ny fetra rehetra mety hitranga.
6. Fanajana avy amin'ny namana
Ny fisakaizana dia tsy mitovy amin'ny fifandraisana amin'ny asa, noho izany ny fihetsikao amin'ny namana lahy akaiky dia tsy hitovizany amin'ny any am-piasana.
Ny namana dia tokony hahatonga anao hatoky tena sy hanana fahatokisan-tena, ary ny fisakaizanao dia tokony hahatsapa fa mahasoa sy salama - ho an'ny ankamaroan'ny fotoana, farafaharatsiny.
Ny fahazoana fanajana amin'ny lehilahy dia mitaky haavon'ny hery sy fahaleovan-tena mitovy.
Avereno indray, manana hevitra! Raha tsy te-hahita ilay sarimihetsika aroson-dry zareo ianao dia lazao azy ireo.
Mety ho taitra kely izy ireo amin'ny voalohany raha tsy dia milaza izany matetika ianao, fa ho zatra izany.
Amin'ny fanaovana ireo zavatra kely ireo dia manamboatra ny fomba fahitan'ny namanao lahy anao ianao.
Raiso ny fifehezana amin'ny fijoroana ho anao ary mifikitra amin'ny basy. Ho tsapan'ny namanao fa tsy mora ny mandehandeha manerana anao ary hanaja anao amin'ny fahatokisanao.
7. Fanajana amin'ny fifandraisana
Raha ao anaty fifandraisana ianao ary mahatsapa fa tsy manaja anao ny olon-tianao dia mila miova ny zavatra iray.
Zava-dehibe ny mahatsapa raha tsy hajaina ianao ary mila miala amin'ny fifandraisana, na raha zavatra heverinao fa afaka miova ity nefa tsy misy fiatraikany amin'ny fiainanao mandritra izany.
Raha miresaka momba ny fifanajana amin'ny fifandraisana dia azonao atao tsara ny manaraka ny lalàna mitovy amin'ny fifandraisana hafa.
tsy mahita ahy john cena
Alaharo izay tianao ho raisina ary aza matahotra ny serasera misokatra sy marina.
Raha fifandraisana vaovao io dia mety samy mahita ny fetra sy ny haavon'ny fampiononana fotsiny ianareo roa.
Raha niaraka ianao nandritra ny fotoana kelikely, ny haavon'ny tsy fanajana tsapanao dia mety ho lasa fahazarana rehefa mandeha ny fotoana.
Na izany na tsy izany dia afaka manao izay fara herinao ianao mba hifehezana ny toe-javatra.
Atombohy amin'ny resaka marina momba ny fahatsapanao. Mora kokoa ny manao izany amin'ny mpiara-miasa fa tsy amin'ny lehibenao, ohatra, satria tokony hahatsapa ho voaro sy tiana amin'ny fifandraisanao ianao.
Tsy maninona ny malemy miaraka amin'ireo atokisanao. Miresaka momba ny zavatra tsapanao, ny fahatsapanao te mahatsapa, ary ny zavatra heverinao fa samy afaka ataonao hahatongavana any.
8. Hajao Izy
Fantatsika rehetra ilay ohabolana hoe 'mitondrà ny hafa araka ny itiavanao ny fitondrana azy', ary tena marina izany raha ny amin'ny fanajana.
Toy ny olona rehetra, raha te hajaina ianao dia tsy maintsy ataonao izany.
Manehoa fanajana ilay olona hafa amin'ny fanokanana fotoana hihainoana izay lazain'izy ireo, fihazonana ny fifandraisan'ny maso ary amin'ny ankapobeny manana fotoana kely ho azy ireo sy ny heviny.
Amin'ny fampisehoana fanajana ilay olon-kafa, dia ataonao mazava tsara izay antenainao manokana.
Mianatra tsy tapaka isika rehetra, mba hahafahanao misafidy ny manipy azy santionany ara-tsosialy ary hanomboka azy amin'ny lalana marina!
Ny lehilahy sasany dia mila fanomezan-toky fa miahy azy ireo ianao na liana amin'izy ireo.
Tsy milaza aminao izahay handatsaka ny zava-drehetra, fa alao antoka fa ho fantatry ny mpiara-miasa aminao fa laharam-pahamehana izy ireo amin'ny fiainanao.
Lazao azy ny halehiben'ny halehibeny, tohano ny zavatra tadiaviny ary ho mpampionona azy lehibe indrindra.
Mety tsy dia misy dikany aminao izany, fa ny fitiavan-dehilahy dia mila tapaka lalan-dra matetika matetika, koa aza matahotra milalao an'izany.
Ampahafantaro ny mpiara-miasa aminao fa tianao ny mandany fotoana miaraka aminy, ampahafantaro ny lehibenao fa zava-dehibe izy amin'ny fanaovana kafe azy.
Efa fomba taloha sy daty io, fa tena hampiala anao amin'ny tongotra ankavanana!
9. Ianaro ny fomba hitantanana azy
Zava-dehibe ny hijoroana ho anao rehefa mahazo fanajana ny hafa.
Asehoy fa tsy matahotra ny hanana hevitra ianao ary matoky tena fa afaka manohana izany.
Aza mahazo moka, satria mety hiteraka olana ara-pahefana sy lolom-po be izany. Fa alao antoka ny fanapahan-kevitrao fa hahazo fanajana be ianao amin'izany irery.
Tian'ny lehilahy ny fanamby rehefa mahatsapa izy ireo fa hahasoa azy roa tonta. Raha ataonao izay hahatonga azy ho adala na tsy mahay manoloana ny mpiara-miasa dia tsy hifarana tsara mihitsy izany.
Mitadiava fomba hamaritana ny hevitrao nefa tsy mahamenatra azy.
Ataovy toy ny ao amin'ny ekipa iray ihany ianao - mankasitraka ny heviny ianao, saingy mieritreritra ianao fa ny fomba fanao manokana dia mety hiasa tsara kokoa 'ho an'ny olona rehetra tafiditra.'
Raha afaka mivarotra ny hevitrao ianao ho vahaolana amin'ny olana lehibe iray, ary raha avelanao haka crédit kely momba izany izy dia hanomboka haneho fanajana bebe kokoa anao izy tsy ho ela.
Mazava ho azy, na dia ilaina aza izany mahasahy ary matoky tena, ny fanajana koa dia mikasika ny fanomezana izay ilain'ny hafa.
Indraindray izany dia midika hoe mihemotra ary mandeha amin'ny fomba malefaka sy malefaka. Tsy mila midika hoe miala amin'ny ego-ny io fa midika fotsiny hoe mandeha amin'izay mety aminy ianao.
Ny lehilahy sasany dia mila karakaraina amin'ny fomba hafa, ka mety hidika izany fa milalao ny ilanao vehivavy ary mangataka fanampiana aminy.
Ampahafantaro azy fa manome lanja ny zavatra holazainy ianao ary mila azy izy hanome torohevitra anao momba ny tetikasanao farany.
Ny lehilahy rehetra dia toy ny mahatsapa fa ilaina sy manan-danja, koa milalaova amin'izany amin'ny fanatonana azy matetika hanampy azy matetika.
Hanana fanajana be dia be ianao amin'ny alàlan'ny fahaizanao mandanjalanja. Raha miovaova ianao amin'ny fomba fiasa sy ny fanapahan-kevitra raisinao dia tena hanaja anao izy.
Manandrama zavatra vitsivitsy hitadiavana izay mety indrindra amin'ny olona tsirairay atrehinao.
Raha ny famahana ny fifandonana dia mila misokatra ianao ary vonona ny hanaiky ny fomba fijerin'izy ireo - toa ny ataonao amin'ny olona rehetra, marina tokoa!
10. Ianaro ny fomba hitantanana ny tenanao
Ny fianarana mitantana ny tenanao dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hahazoana fanajana amin'ny lehilahy.
Averina indray, stereotype taloha izy io, saingy misy antony - misy ny lehilahy mihevitra ny vehivavy be loatra ny fihetsem-po.
Raha sosotra ny lehilahy amin'ny fivoriana dia mafana fo izy ary voatosika amin'ny asany. Raha manao toy izany koa ny vehivavy dia manjavozavo izy ary tsy milamina.
Ity dia fomba tsy ara-drariny mba hizarazara ny miralenta, saingy mitranga foana izany.
Mialoha ny lalao amin'ny alàlan'ny fitantanana ny fihetsem-ponao ary aza manome lehilahy ny antony hijerena anao ho 'vehivavy mampihetsi-po mahazatra.'
Midika izany fa mifantoka hatrany ary ho matihanina any am-piasana. Tsy mitomany, tsy miresaka momba ny fihetseham-ponao.
Tazomy io karazana zavatra io mandritra ny alina misy divay miaraka amin'ireo zazavavy ary mifantoha amin'ny maha matihanina anao araka izay azonao atao.
Mitovy amin'ny fifandraisanareo izany - aza omena antony ny mpiara-miasa aminao hieritreretana fa saro-piaro tsy misy antony ianao, na ny toetra amam-panahy hafa maloto!
Mijanona ho tony, maneho fanajana ny tenanao amin'ny alàlan'ny fanarahana zavatra, ary tsy ho ela ianao dia ho faly amin'ny fanajana.
Manana ny hadisoana nataonao. Hanampy ny lehilahy hanaja anao bebe kokoa izany satria ho hitany fa tsy matahotra handray andraikitra ianao.
Mijanona ho tompon'andraikitra ary ho tsapan'ny lehilahy fa tsy matahotra izay mety ho eritreretin'izy ireo ianao.
Hajain'izy ireo ny fahamarinanao sy ny fahamarinanao ary hiafara hatoky anao bebe kokoa noho ny nataon'izy ireo talohan'ny nanaovanao ny hadisoana aza - ary tena zava-dehibe ny fahatokisana raha ny fanajana.
11. Mahaiza Miorina Tsara
Mety hahatsapa ho tsy azo atao izany indraindray, fa ny fanovana kosa no hitranga raha manenjika azy ianao.
Alaharo izay tianao hiaina ary ataovy izay tsara indrindra vitanao mba hitazomana sy hanana saina malalaka.
Raha miha be loatra ny raharaha ary tena miady mafy amin'ny fifandraisana ianao, na matihanina na amin'ny tantaram-pitiavana, dia mety mila mieritreritra ny hanao fanovana lehibe kokoa ianao.
zava-dehibe indrindra tokony ho fantatra amin'ny fiainana
Amin'ny faran'ny andro, isika rehetra dia mendrika ny ho, ary hahatsapa, hajaina. Raha tsy mahavita na vonona ny hanefa izany filan-dralehilahy izany izahay, dia manoro hevitra anao izahay mba hanapaka ny fifamatorana ary hanao izay fara herinao handrosoana.
Ankoatra izany, mijoroa tsara hatrany ary manohiza manantitrantitra izay fantatrao fa mendrika anao.
Ny olona sasany dia tena mila lazaina amin'ny fomba fitondran-tena fotsiny, koa tadidio fa ny fanaovana ny marina dia zava-dehibe!
Mbola tsy azonao antoka ve ny fomba hanajan'ny lehilahy anao?Miankina amin'ny fitondran-tenany ankehitriny sy ny fomba itondrany anao, mety tena manampy tokoa ny mahazo torohevitra mifanaraka amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana. Ny firesahana amin'ny olona iray momba ny toe-javatra misy anao sy ny fahazoanao hevitra rehefa manandrana fomba isan-karazany ianao dia afaka mampifandray ny fifandraisanao amin'ny toerana tianao hisy azy.Ka maninona raha mifampiresaka an-tserasera amin'ny iray amin'ireo manam-pahaizana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy amin'ny fitarihana anao amin'izany. Tsotra.
Ahoana ny fomba hialana amin'ny fifehezana amin'ny fifandraisana
toetra tadiavinao amin'ny namana
fomba hanampiana ny namanao amin'ny fisarahana
ny toetran'ny olona misy poizina ratsy
ny fomba handrosoana rehefa misy tsy mamela anao
ny fomba handresena lolompo amin'ny fifandraisana